Nagu saabsan - Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd.
Waxaan haysanaa in kabadan 19+ sano oo khibrad ah cilmi baarista iyo horumarinta agabyada isku dhafan
Yan Tuo Composite Material Technology Co., Ltd. wuxuu ku yaalaa Weihai dhamaadka bari ee Shandong Peninsula iyo Cape of Good Hope in the East. Shirkadda waxaa la aasaasay Ogosto 14, 2012. Shirkaddu waxay inta badan ku hawlan tahay cilmi-baarista iyo horumarinta, soo-saarka iyo iibinta qalabka isku-dhafan.
Wax soo saarka ugu muhiimsan waa qeexitaanno kala duwan oo rollers hage carbon, qaansooyin fiber kaarboon, durbaannada fiber kaarboon, tuubooyin dogob weyn oo dhexdhexaad ah oo isku dhafan, tuubooyinka anteeno, tuubooyin kaarboon flanged, iyo ulaha joogsiga baabuurta. Wax soo saarka ugu muhiimsan waa cilmi baarista iyo horumarinta tiknoolajiyada tubbada fiber-ka; Falanqaynta iyo iibinta dhuumaha fiber-ka kaarboonka; Soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha iyo teknoolojiyada inta u dhexeysa xereynta.
Waxaan had iyo jeer siinaa macaamiisha badeecooyin wanaagsan iyo taageero farsamo, iyo adeegga iibka kadib.
Shirkadeenu waxay hada soo saari kartaa qalab isku dhafan oo balaaran, kaarboonka ama dhuumaha fiber galaaska dhexroorkiisu yahay 500mm iyo dherer ah 20 mitir, iyo tuubooyin kale oo iskutallaab ah oo dherer kala duwan leh
Naqshadeynta wax soo saarka waxaa lagu fulin karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha.
Tan iyo aasaaskeedii, shirkaddu waxay ku guuleysatay sumcad wanaagsan macaamiisha iyada oo leh sumcad wanaagsan iyo tayo lagu kalsoonaan karo. Shirkaddu waxay u qaadataa horumarin xirfadeed sida jihada, alaabooyin iyo adeegyo tayo sare leh ujeeddo ahaan, waxayna la kulantaa baahiyaha macaamiisha hadaf ahaan, si loo gaaro horumar muddada-dheer iyo tonic. Waxaan sidoo kale si joogto ah u qaban doonnaa tartamada xirfadaha, waxaan kaloo qabanqaabin doonnaa in shaqaaluhu ay aadaan meelo kala duwan si ay wax u bartaan una soo booqdaan.
Shuruudaha Ganacsiga: FOB, CFR, CIF
Shuruudaha Bixinta: - LC, T / T, D / P, PayPal, Western Union,
Celceliska Waqtiga Lead: 15 maalmood oo shaqo gudahood
Tirada Shaqaalaha Dibadda ee Ganacsiga: 5-10
Sanadka Dhoofinta: Tan iyo 2013
Boqolleyda Dhoofinta: 25% -30%
Suuqyada waaweyn: Waqooyiga Ameerika, Koonfurta Ameerika, Bariga Yurub, Aasiya, Afrika, Yurubta Galbeed
Dekedda ugu dhow: Qingdao
Shirkaddayadu waxay ku takhasustay soo saarista qeexitaanno kala duwan oo ah tuubooyin isku dhafan. Waxaan leenahay in ka badan toban sano oo waayo-aragnimo wax soo saar ah oo si xirfad leh u fulinno mashaariicda OEM. Dabcan, waxaan sidoo kale ka sameysannaa ulaha kalluumeysiga isla waqtigaas. Haddii aad na siiso fursad aan kula shaqeyno, waxaad la kulmi doontaa adeegga ugu fiican iyo tayada wax soo saarka ugu fiican.
Si tan loo gaaro, waxaan si diiran u soo dhaweyneynaa macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ee ka kala socda qeybaha kala duwan ee bulshada si ay u soo booqdaan una hagaan.